Apple ka mgbe nile na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume na downloads na-amụbakwa na nke a na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na ihe kasị mma na ọkaibe mmemme nkà na-eji pacify ndị ọrụ . Ọ bụkwa na-kwuru na otu onye dị otú ahụ ihe atụ bụ iMovie na e mepụtara site na ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume na ike mfe-eji dị ka video nchịkọta akụkọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume nke a nke na ga-ekwe ka ha na-aga site kasị mma na-adọ.
Gịnị bụ iMovie 9?
Ulo oru na 1999 iMovie bụ usoro ihe omume onye 8th version ma ọ bụ iMovie 9 na oru n'afọ 2009. Nke a na usoro eruwo na ọtụtụ upgrades na maka otu ihe ahụ ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke si kwalite version. The URL https://en.wikipedia.org/wiki/IMovie nwere niile banyere upgrades na e rụrụ na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na usoro ihe omume a na ma ibudatara na ukara website ma ọ bụ ọkaibe saịtị na-họọrọ na nke a iji jide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu omume ebudatara enweghị ihe ọ bụla nke.
E nwere ụfọdụ saịtị na-ekwu na-enye download njikọ nke iMovie ma n'ezie na njikọ bụ ihe okenye ma ọ bụ ọhụrụ version. The ihe ndị ọzọ na-agụnye nbudata na echichi nke ihe omume na-adịghị mkpa na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe omume ebudatara iji jide n'aka na ihe kasị mma onye ọrụ nke ego a na-eme enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-enye onye ọrụ na njikọ kasị mma download saịtị na pụrụ ịbụ ndị kasị mma na onye ọrụ na nke a pụrụ ịtụkwasị obi na njikọ blindly dị ka ha na-eje na saịtị na dị nnọọ ma ama mgbe ọ na-abịa tech ụwa.
Ka e kọwara tupu nakwa na iMovie 9 bụ ike ibudata site na ọnọdụ ahụ bụ ihe kasị na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe URL si na nke a na-ịchọgharịrị iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye ihe ọ na-achọ. Ọ na-na-kwuru na nke a akụkụ nke nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma njikọ na ike ga-eji na-eme needful enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
2. File Hippo
4. Official download njikọ
Top Nkuzi maka iMovie 9
Na-esonụ bụ n'elu 5 Nkuzi amụta iMovie site ọkọ na ọ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a:
1. Izzy Video nkuzi
Na n'elu 2 awa nke video onye ọrụ ga-amarakwa na niile isi na ụdị na ga-emekwa ka n'aka na omume na-eji na nke kacha mma n'ụzọ iji hụ na kasị mma na ndị ọkaibe pụta na-eme ngwa ngwa. The nkuzi dị mfe ịghọta dị ka a ọkachamara larịị nọgidere na-enwe.
A na usoro a elu gosiri dị ka ọ na-enye ihe niile ozi ndị dị mkpa nke a chọrọ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe pụta na-eme enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu mere, nke a na ọzụzụ a ukwuu tụrụ aro na nke a.
Nke a video nkuzi na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-adịghị nyere site ọ bụla ọzọ website na nke a. Ọ na-emekwa n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe omume ndu-ịchọgharịrị site ịmụta iMovie 9 ke omimi. Onye nduzi maa na-ewe mgbu na-akọwa ihe niile na nke a.
Usoro ihe omume na-arụ a fim nke 4.8 nke 5 nke na-egosi na ọrụ na-ukwuu pacified mgbe na-ewere nke a ọzụzụ dị ka ọ dị mfe ịghọta na echiche e kọwara n'ụzọ zuru ezu.
Mgbe Lynda Udemy bụ otu nke kasị mma na saịtị na ga-eme ka n'aka na iMovie a kọwara na kasị mma na n'ụzọ. Ọ ga-eme ka n'aka na echiche na-ekpocha na a n'ụzọ nke ọ bụla ọzọ na saịtị na-eme na nke a. Larịị nke a nkuzi bụ ọkachamara na ọ bụ oké maka tech savvy ọrụ.
The n'ozuzu mba nke nkuzi dị elu nke na-egosi na ọrụ bụ maa afọ ojuju mgbe na-ewere ọzụzụ dị ka echiche e mere ike na ihe niile tech savvy ọkachamara a nkuzi bụ a ere na-ukwuu tụrụ aro na nke a.
4. Tutorial na YouTube
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe nkuzi na bụ n'efu na nwere ike anya na YouTube iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ ozi. The ezi ihe bụ na n'adịghị ka ndị ọzọ Nkuzi a video nwere ike mfe ike ibudata na onye ọrụ nwere ike na-ekiri bụ oge na ọzọ iji nweta a ghọtakwuo ele.
N'ime 2000 amasị na mmekọrita a video na-egosi na e mewo ka ọ professionally na karịrị ọtụtụ ugwo Nkuzi nke yiri genre nke na-egosikwa na larịị nke professionalism na-nọgidere na-enwe na nke a na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke ihe kọwara.
5. Vimeo nkuzi
Ọzọ a na nkuzi, e mewo ka iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe Filiks na-agbakwunyere n'ime usoro ihe omume nke mere na ha nwere ike na-mụtara mfe. A nkuzi na-emekwa ka n'aka na mmekọrita nke iMovie na Vimeo na-kọwara n'ụzọ zuru ezu iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
Ọzọ a nkuzi nwere a elu ọnụ ọgụgụ nke echiche nke maa na-egosi na onye ọrụ nwere ndị kasị mma na mmalite nke nkà ihe ọmụma na mmekọrita ihe e kọwara na ihe niile nke na e mere ihe na ala na iji na-egbo onye ọrụ iji jide n'aka na zuru ezu iwu n'elu omume na-ahụ na professionalism.
iMovie: Export Projects ma ọ bụ Video si iMovie
Olee otú mbubata MOV ka iMovie
Olee ka ibubaa iMovie on Mac / iPad
> Resource> iMovie> 5 Atụmatụ maka iMovie 9 mkpa ka ị mara